Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey dagaal Hiiraan ku dhax maray kooxo Shabaab ka wada tirsan.
Wararkii ugu danbeeyey dagaal Hiiraan ku dhax maray kooxo Shabaab ka wada tirsan.
Hiiraan:-Dagaal dhimasho iyo dhaawac badan keenay ayaa maleeshiyo ka wada tirsan Shabaab ku dhex maray mid ka mid ah tuulooyinka ay ka joogaan Hiiraan oo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Belet Weyn.
Tiro aan si rasmi ah loo hubin laakinse kor u dhaafeyso ilaa 15 ayaa laga dilay mid ka mid ah kooxdii halkaasi isku dagaashay walow uu dhaawacu yaalo meelo badan oo ka mid ah degaankii lagu dagaalamay, kedib markii uu si lama filaan ah uga qarxay halkaasi.
Shacabka degaankaas qaarkood ayaa sheegay iney u muuqato in kooxdii dadka ku dhibi jirtay magaca Shabaab iyagoo diin sheeganaya ay hada u muuqdaan kuwo ay inkaartii shacabka ku dhacday kedib wal wal iyo towfiiq xumo soo wajahday.
Maxaa sababay inuu dagaalkaasi qarxo?
Dagaalka ayaa qarxay kedib markii ciidamo ka tirsan Shabaabka Hiiraan kana soo jeedo degaano ka baxsan Hiiraan damceen iney hubkooda iska iibiyaan kedibna dib ugu laabtaan dhulkii ay degaan ahaan ka soo jeedeen taasi oo ka careysiisay dhalinyaro reer Hiiraan ah oo ka tirsan Shabaab maadama ay ogyahiin hadii kuwani baxaan in shacabka uu dagaal la galayo oo aysan cafineyn madama ay tacadi badan ka geeysteen amaba u geeysteen shacabka Hiiraan. dagaalka oo leysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la sheegayaa in ay ku awood roonaadeen dhalinyaradii Shabaab Hiiran ka soo jeeday kedib markii ay inta ay meel goyni ah ku soo shireen kedibna 5 maleeshiyo ka dileen kuwii doonayey iney baxsadaan waxaana goobta ugu danbeyn la wareegay maleeshiyadii dilka iyo dagaalka biwaaday walow kuwii kale difaac kaka jiraan meel aan goobtii uu dagaalku ka dhacay ka fogeyn.
Sida ay sheegayaan dadka degan degaanka Dhirmaadle oo 42Km dhinaca waqooyi bari kaka beegan magaalada Belet Weyne ayaa xaqiijiyey in dagaalkaasi kooxdaan dooneysay iney ka tagaan Hiiraan lagu qaaday ay amreen rag ka tirsan Shabaab oo ku sugan gudaha magaalada Belet weyne taasi oo soo dedejisay dagaalka kediska ah.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay maleeshiyo ka tirsan Shabaabka Hiiraan u baqoolaan degaanadii ay ka soo jeedeen laakinse Hiiraan ayaa ka sameysan degaan koox kasta oo hub la gasha aysan ugu danbeyn kala bixin taasi oo sida la sheego laga dhaxlay dagaalo iyo colaado horey halkaasi uga dhacay oo ugu danbeyn hubkii ay kooxahii yimid amaba Hiiraan dagaalka ku soo qaaday wado kasata oo loo maroba lagala haro.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in uu qilaafka dagaalkaasi uu saameyn weyn ku yeeshay saraakiisha Shabaab ee ku sugan gudaha magaalada Belet Weyn halka ay kuwane isku diyaarinayaan sidii ay u gaari lahaayeen Dhirmaadle oo ah goobtii uu dagaalku ka dhacay, hase ahaatee kooxdii dooneysay iney baxaan amaankooda ma sugna iyagoo walito ku adkeysanaya inay doonayaan iney ka baxaan guud ahan degaanada Hiiraan hadii kale ay dagaalka ay kula jiraan kooxda ka soo horjeeda ay sii wadi doonaan ilaa ay hadafkooda ka miro dhaliyaan.
Maxey tahay sababta ka danbeeysa ee dhalinyaradaan loogu diidayo iney ka baxaan Hiiraan oo ay degaanadooda dib ugu laabtaan?
Waxaa lagu soo waramayaa inta badan hubka ay heystaan Shabaabka ku sugan Hiiraan ee ka soo jeeda degaan ahaan in lagu iibiyey canshuur laga qaaday ganacsatada iyo Shacabka Hiiraan sida ay ka dhawaajiyeen amaba laga soo xigtay Shabaabka qaarkood.
Mid kale waa in aysan awood ay Hiiraan ku sii maamulan aysan heysan Shabaabka ku hari doona Hiiraan mar hadii ay ka baxaan kuwa ka soo jeeda Galgaduud, Bay, Bakool iyo labada Shabeele dhibaatooyin aan yareyn ku haya shacabka Hiiraan.
Marka laga soo tago dagaalka ka dhacay halkaasi hadane dhawaantaan qaar ka tirsan Shabaabka oo dagaal gaadmo ah ku qaaday ciidamada xoogaga reer Hiiraan ee ku sugan degaanka KalaBeyr waxaa qorshahoodii fashiliyey Shabaab kale kedibna dagaal kooban ayey qaadeen waana soo laabteen.
Qilaafka Shabaabka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ku sugan saameyey ayaa laga yaabaa in lagu dhaco hanti badan oo ay leeyahiin ganacsatada degaanadaasi ka soo jeeda walow ganacsatada qaarkood kooxahaan is qilaafay la shaqeyn jireen hadane tiro ka mid ah ganacsatada wax gacan saar ah lama laheyn Shabaab iyo ajaanibtooda weyna adag tahay si hantidooda u bad baado.
Waxa maanta la hubo oo leysku raacsan yahay waa in Shabaab bishan Ramadaan amar ku dhacay Alaahne wal wal iyo walbahaar ku abuuray iyagoo goobkasta oo ay maanta joogaan ciidamadu kala shakisan yahiin qaarkoodna isku dagaala.
· admin on August 21 2011 12:17:06 · 0 Comments · 1803 Reads ·
14,614,697 unique visits